ठुला ठुला कुरा गर्ने सरकारका पदाधिकारीहरूलार्इ यो दृश्यले छुन्छ कि छुदैन होला? – PathivaraOnline
Home > समाचार > ठुला ठुला कुरा गर्ने सरकारका पदाधिकारीहरूलार्इ यो दृश्यले छुन्छ कि छुदैन होला?
ठुला ठुला कुरा गर्ने सरकारका पदाधिकारीहरूलार्इ यो दृश्यले छुन्छ कि छुदैन होला?
छुकछुके रेल कुदाउने, हिन्द र प्रसान्त महासागरमा पानी जहाज चलाउने, नेपाल देखि बंगलादेशसम्म सुरुङ मार्ग बनाउने प्रधानमन्त्री,मन्त्री र स्मार्ट सिटी बाहेक अर्काे नबनाउने मेयर याे बाटाे हिंड्छन् या हिंड्दैनन् त्याे त थाह भएन् तर जनतालाई तत्काल चाहिएकाे खाल्डाखुल्डी बिहिन, हिउदमा धुलाे वर्षातमा हिलाे मुक्त सडक हाे । प्रधानमन्त्री जी रेल चलाउदै गराैँला पानी जहाज किन्दै गराैँला नेपाल देखि बंगलादेशसम्मकाे सुरुङ खन्दै गराैँला पहिला काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुराैँ ।
एकदिनकाे वर्षातले याे हालत छ राजधानीमा वर्षायममा के हाेला त्याे साेचाैँ ? धरहरा बनाउन भिमसेनलाई बाेलाउनु पर्ने कुरा हामीलाई थाह छ रानीपाेखरी मल्लका छाेरा नाति काेहि जिवित भए उनलाई जिम्मा दिउला राजधानीका सडक बनाउन कसलाई हारगुहार गर्ने सरकार ? प्रधानमन्त्री रेल र पानी जहाज बाहेकका कुरा सुन्न नरुचाउने,मन्त्री सुरुङ्ग देखि अर्काे भाषा नबाेल भन्ने मेयर काठमाडौंका बासिन्दालाई बाेकाएकाे पाप सावित भएकाे छ याे सडक कसले बनाउने सरकार ?
एकदिन वर्षा हुदा यस्ताे छ दिनप्रतिदिन वर्षा हुदा कसरी पार पाउने सरकार ? नाम फेरिदिउ सरकार काठमाडौं सामान्ती नाम भयाे हिलाेमाडाैं,धुलामाडाैँ,फाेरमाडाैँ राखाैँ ठाउँ जस्ताे नाम त्यस्तै राख्दा ठिक हाेला कि सरकार ? कित लाज मानाैँ सरकार पुरिदिउ यी खाल्डाखुल्डी बनाइदिउ राजधानी जस्तै साँच्चिकै काठमाडौं । नत्र कसरी जाने पानी जहाज चढ्न? कसरी पुग्ने छुकछुके रेल्वे स्टेसन, हिलाम्मे धुलाम्मे भएर चिल्लाे रेलमा भित्र छिर्दा रेल फाेहर हाेला पानी जहाजमा चढ्दा पानी जहाज फाेहर हाेला नि सरकार साेचाैँ त चिटिक्क परेकाे सफा रेल र पानी जहाजमा हिलाम्मे,धुलाम्मे भएका हामीलाई छिर्न दिएन भने?
कसम सरकार यी खाल्डाखुल्डी पुरेकाे कसैले विरोध गरेछ भने मुखमा मुट्कि हान्ने काम मेराे सरकार पुरिदिउँ खाल्डाखुल्डी जे पर्ला पर्ला ।
लोकान्तरकाे तस्विरहरू अभाव शाह ठकुरीकाे फेसबुकबाट ।
एमाले माअोवादी एकतामा यिनी हुन् द्विविधा उब्जाउने कुराहरू…
यी हुन नेपालीहरुको मायाले भारत हल्लाउन सफल बनेकी नेपाली चेली, हेर्नुस तस्विरमा
काठमाडौ उपत्यकामा गुड्छन् आजवाट यस्ता गाडी, लामो दुरीका सवारीले पनि यात्रु बोक्न पाउने
साउन महिनामा महिलाले मात्र, किन लगाउन्छ मेहेन्दी र हरियो चुरा ?
मेरो जात लुकाएर खड्का राखिदिए १४ बर्ष पछि श्रीमतीले छोडेर गइन् रुदैं श्रीमान मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस्)
मौसम अझै सुध्रिने संकेत छैन, यस्तो दियो महाशाखाले चे तावनी